RW Kheyre oo 85% badalaya Golaha Wasiiradiisa, Ma U Baahnaan Doonaa Kalsoonidda Baarlamaanka,? – Hornafrik Media Network
RW Kheyre oo 85% badalaya Golaha Wasiiradiisa, Ma U Baahnaan Doonaa Kalsoonidda Baarlamaanka,?
RW Xasan Cali Kheyre wuxuu doonayaa inuu eryo ilaa lix (6) wasiir oo ka tirsan xukuumadda, kuwasoo afar ka mid ah aanay ahayn xildhibaano ka tirsan golaha shacabka. Xukuumada Kheyre waxey caan ku tahay xilka qaadis, inta badan wasaaradaha waxaa ka dhacay isbadal mudadii ay xukuumadaan jirtay, taasoo ah iney ehel u tahay khilaaf iyo is qab qabsi, hadii aanu khilaaf jirin ama uu kheyre nin quman yahay intaan oo qof shaqada lagama eryeen.
Sida xogta lagu helayo ku dhawaad lix wasiir ayaa laga yaabaa iney shaqada ka baxaan ama laga eryo xukuumadda kheyre, xubnaha la hadal hayo iney bixi doonaan waxaa ka mid ah
1. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomaar, Wasiirka Duulista Hawada
2. Deeqo Yaasiin Xaaji, Wasiirka Haweenka iyo xuquuqul Insaanka
3. Cabdi Maxamed Sabriye, Wasiirka Arrimaha Gudaha
4. Cabdirashiid Maxamed Axmed. Wasiirka Batroolka
5. Cabdiraxman Xoosh Jibriil, Wasiirka Dastuurka
6. Maxamed Abukar Islow (Ducaale) Wasiirka Amniga
RW Kheyre ayaa dadaal ugu jira in saaxibkiis oo ku fashilmay wasaaradda amniga uu ka dhigo duqa magaalada Muqdisho, balse hubanti isloow wax badan kama uusan qaban amniga dalka, waxaana xeel dheerayaashu ay aaminsan yahiin inuu mudan yahay in xilka laga qaado.
Ra’isulwasaare Xasan Cali Kheyre wuxuu sheegaa ineysan is khilaafeynin isaga iyo madaxweyne Farmaajo laakiin mar walba wuxuu shaqada ka eryaa qaar ka mid ah wasiiradiisa taasoo salka ku heysa khilaaf.
Haddii isku shaandheyntaan ay dhacdo waxey ka dhigan tahay in 85% xukuumadda Xasan Cali Kheyre isbadal lagu sameeyay, waxaana sida uu sharciga qabo ay tahay in kalsooni weydiisto golaha Shacabka. RW waxaa uu isbadal ku sameeyey golaha wasiirada badankood iyaadoo sharciga uu leeyahay 30% haddii u badalo inuu kalsooni soo weydiisto Baarlamanka mana jirto kalsooni uu soo weydistay iyo cid ku qabtsatay inuu kalsoonii soo weydiisto.
Dhinaca Kale, maalin walba waxay dawladda RW Kheyre sheegtaa inay la dagaallameyso Musuq Maasuqa iyo sharcidarrada ama sharciyada oo la jebiyo, Waxayna iyada laf ahaanteedu hadda lumisay Sharciyaddii ay ku shaqaynaysay oo ay qasab tahay inay Baarlamaanka Kalsooni waydiistaan, balse ma muuqato Ifafaale ay Kalsooni ku waydiisanayaan Golaha Shacabka.
Itoobiya oo Xabsiga Dhigtay Wasiiraddii laga soo celiyay Hargayso iyo Saraakiil
DFS oo dishay Horjooge ajnabi ah oo ka tirsan Al-Shabaab (Magaca iyo Wadanka)